Mayelana NATHI - Izixazululo ze-OMG
I-Singapore Channel 8 News (i-27 Aug 2017)
OMG Solutions - Sinikezela ngezixazululo zobuchwepheshe ezahlukahlukene njengokuvimbela ukuwa, ama-alamu ezimo eziphuthumayo / zosizi, ama-tracker we-GPS namakhamera okuphepha. Abanakekeli a abanakekeli ukunciphisa umthwalo wabo ngokomzimba nangokomzwelo ngenxa yezimfuno zokubheka abakhubazekile noma asebekhulile.
I-vCare uhlelo lwe-alamu yokuphepha oluzosetshenziselwa abantu abadala, ekhaya. Uhlelo luhlinzeka ngenhlanganisela yokusetshenziswa, kufaka phakathi ukuphepha kwekhaya, izindlela zokuphila ezinempilo nokunakekelwa kwabantu asebekhulile. Isebenzisa amanethiwekhi amabili (i-WiFi ne-GSM / 3G noma i-4G) ukudlulisa imininingwane yokuqalisa ama-alamu - indlela elula, ephephile futhi esheshayo.
Noma ngabe usehhovisi noma usohambweni lwebhizinisi laphesheya, i-vCare inawe. Ungasazi kalula isimo sohlelo lwakho lwe-alamu ehlakaniphile, ukuqapha indlu yakho futhi unakekele abazali bakho. Kungenzeka futhi ukuthi uhlole amazinga omswakama kanye namazinga okushisa endlu (ngaphakathi nangaphandle). Nge-vCare, ungaqinisekiswa ngokuphepha nokuphepha kwakho.
Ivimbela ukuwa nokulandelwa okulula kwabantu asebekhulile
Ama-Monitor Monitor Prevention Fall
Ama-alarms ethu okuvimbela ukuwa kwe-Fall alula ukuyisebenzisa: Xhuma umbhede wokubheka isisindo, isitifiketi sesitulo, noma umbhede wezansi endaweni yokuqapha yokuvimbela ukuwa. Bese ubeka isikhwama sokucindezela isisindo embhedeni noma esihlalweni, ngaphansi komuntu ohlala engozini yokuwa noma ukuhamba. Izindwangu zokuzwa isisindo zibeka eceleni kombhede noma umnyango. Lapho imizamo yokuhlala, ukucindezelwa kususwe kumbhede noma kusihlalo sesitulo noma kusetshenziswe kumatshini ophansi, okwazisa umnakekeli nge-alamu ezwakalayo, i-pager enokuthula, i-alamu ye-hallway, ukukhanya kocingo oluphuthumayo, noma umlingo ophakathi ukuze bakwazi unikeze usizo uma kudingeka.
I-Dementia / Asebekhulile / Izingane ze-GPS Tracker ne-Fall Detector
Ukubuka okuphelele kwe-65528 Ukubuka kwe-18 Namuhla